Semalt: Iji data echekwara nke ọma iji nweta okporo ụzọ ọzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị
Ever gabuola n'ụlọ ebe a gbasasịrị, na-achọ sọks? Ọ dịghị nzọ adịghị mfe. Otu echiche a na-emetụta weebụsaịtị.
Chọta ozi na ịntanetị dị mfe ma dịkwa mgbagwoju anya, ebe a bụ ihe kpatara ya. Ọ bụrụ na ị na-enye Semalt weebụsaịtị gị, o doro anya na ọ ga-apụta n'elu. Nke a bụ n'ihi na anyị ma etu esi etinye ihe ederede, ederede na onyonyo adabara. Dị ka ndị na-ewu ụlọ, anyị ejirila ọtụtụ afọ na-eji ihe ndị nrụọrụ weebụ gị chọrọ ma anyị achọpụtala otu esi esi tinye ebe nrụọrụ weebụ gị iji rụpụta nsonaazụ ndị ahụ dị mma.
Ọ bụ ya mere ekwesịrị ịdebanye aha weebụsaịtị ọ bụla na Semalt mana ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume, anyị na-amachi mbọ anyị na ebe nrụọrụ weebụ na-ekwe nkwa dịka nke gị. Dị ka ndị ọkachamara, anyị nwere ngwaọrụ na ikike iji hazie ebe nrụọrụ weebụ gị dị mma nke na ọ ga-ahụkwa mgbe niile mgbe ị na-achọ okwu gị mana zuru oke na nke ahụ.
Kedụ Ka Ihe E Si Hụ Haziri?
Ndị a bụ nhazi nke ihe dị n'ime weebụsaịtị nke ọma. Semalt na- enyere ebe nrụọrụ weebụ gị aka site na itinye ihe kwesịrị ekwesị n'ebe kwesịrị ekwesị. Nke a na - enyere ndị ọbịa gị na ndị na - achọ injin ụgbọ elu aka ịnyagharịa n'enweghị nsogbu. Njirimara a nwere ike ịbụ ihe ikpeazụ ị na - efu efu mgbe ị na - anwa ime ka ebe nrụọrụ weebụ gị nọrọ. Mana n’agbanyeghi otu isi okwu SEO gị dị elu, ọ gaghị adị mfe ịchọta ma ọ bụrụ na ewughi weebụsaịtị gị nke ọma.
N'ime ọtụtụ afọ, Semalt arụ ọrụla na ọtụtụ ndị ahịa na weebụsaịtị. N'ime afọ ndị a, ọ bụrụla ihe a na-ahụkarị ebe nrụọrụ weebụ na-eji okwu SEO dị ịtụnanya. Mana weebụsaịtị ndị a anaghị enweta okporo ụzọ ma ọ bụ ihe ọ bụla puru iche, nke na-abụ nnukwu nsogbu maka ndị nwe ha. Mgbe ị napụrụ webụsaịtị weebụsaịtị, agba ya, na eserese ya, naanị ihe ị ga - ahazi bụ ya bụ ihe owuwu.
Uche uche anyị nke mmadụ na-achọ ịlele, usoro, na usoro nke mmụta na nghọta. Ihe nke a putara bu na anyi nwere mmasi n’usoro nke 1,2,3,4 mgbe anyi na achoputa onu ogugu anyi na nchikota onu ogugu a dika 10,000, 100, 3, 6. Uche anyi choro ichota ihe ebe elere anya ha. ibu.
Ndị ọrụ na ịntanetị na-ahọrọ ịmalite ịgụ otu isiokwu ma ọ bụ ọdịnaya weebụ gị site na obere ihe ọmụma dị mgbagwoju anya ruo na nke kachasị mgbagwoju anya. N'ozuzu, ọ bụrụ na ịmalite site na kachasị mgbagwoju anya, ndị na-agụ ya na-efunahụ mmasị ma kwaga na ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma.
Dịka ị maara, atumatu Google nke emebere iji kwado ndị ọrụ. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị na-amasịkwu onye na-agụ ya, ọ na-amasịkwu ya na igwe nchọta Google. Algorithm nke Google na-anakọta ozi site na nchọta ma jiri data a iji tọọ saịtị gị. Otu o si arụ ọrụ bụ na ọ bụrụ na onye ọrụ achọpụta saịtị gị, SERP ma ọ bụ igwe ọchụchọ gị na-enyocha ogologo oge ndị ọrụ a ga-anọ na saịtị ahụ. Ebe nrụọrụ weebụ na-ahazi nke ọma na-eme ka onye ọbịa na-anọ ogologo oge na saịtị ebe saịtị na-adịghị mma na-eme ka onye na-agụ ya laa.
Ihe ndị ọzọ, dị ka ọnụego bounce, dịkwa mkpa mgbe ị na-atụle ntọala saịtị ahụ. Ọdịdị saịtị dị mma nwere ike belata ọnụego ya, yana oge onye na-agụ ya ga-ebi. Mgbe ijikota ihe abụọ a, websaịtị gị ga-ewere ọkwa ọsọ ọsọ.
Ọdịdị saịtị dị mma na-enye saịtị gị ihe njikọ saịtị ka mma.
Njikọ saịtị bụ ndepụta aha na SERP nke na-egosi isi saịtị gị yana ọtụtụ njikọ dị n'ime. Njikọ saịtị a bụ ọla edo ma a bịa na njikarịcha SEO. Ha na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị mfe ọgụgụ site na njirimara gị. Ọ na - atụba onye na - agụ ya ihe ọmụma kachasị mkpa na weebụsaịtị gị, nke na - eme ka aha gị dịkwuo elu, ndị ọrụ tụkwasara obi na ọdịnaya ị na - ebuga. Ihe ndị a niile na-enyere weebụsaịtị gị aka inwe ọfụma na SERP.
Kedu ka ị ga - esi nweta njikọ saịtị a?
Can'tgaghi aga Google console njikwa nkenke wee mejuputa uzo iji nweta njikọ saịtị. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ịnweghị ike ịrịọ njikọ saịtị. A na-enye algorithm nke Google njikọ ndị a na-akpaghị aka mgbe ihe owuwu saịtị gị ghọrọ nke ọma iji ruo eru. Na enweghị njikọ saịtị ndị a, ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ike ịbelata mbelata nke okporo ụzọ gị, CTR dị elu, na ntughari ka ukwuu.
Ngwa ocho oru choro uzo saịtị ka nma maka njem di nma.
Ndị na-eme weebụ dị ka Googlebot na-aga ebe nrụọrụ weebụ dabere na nhazi ha. Ebe nrụọrụ weebụ ahaziri nke ọma na-eme ka ọ dị mfe ma na-aga ngwa ngwa ịkwaga ma chọpụta isi okwu ị debere. Ebumnuche nke WebCrawler a bụ ịtụnye ọdịnaya iji weghachi nyocha ya dịka nsonaazụ ọchụchọ.
I kwesiri ịmara na ihe dị n’ime ebe nrụọrụ weebụ gị bụ Google amaghi nke ọma. Ndị a crawler anaghị achọpụta nsonaazụ ha họọrọ igosipụta mgbe achọrọ isiokwu. Google n'onwe ya apụtawo na-ekwu na ọ nwere ike ha achọpụtala ụfọdụ peeji ma ọ bụ URL taa. Nke a bụ n'ihi na ha anaghị achọpụta Google's WebCrawler. Iji hụ na ebe nrụọrụ weebụ gị na ibe weebụ gị anaghị ata ahụhụ otu akara a, ịkwesịrị ime ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị mfe ịnweta, kpachie anya, na ntanye site na WebCrawler's.
Ọdịdị saịtị dị mma bụ isi maka njikarịcha SEO
Na njedebe, lee ka SEO gị si dị ezigbo mkpa na ọtụtụ oge akọwapụtara saịtị gị kpamkpam. Ọtụtụ ndị ọkachamara ga-arụ ụka na na-enweghị ezigbo nhazi saịtị, SEO gị agaghị aga nke ọma. Ihe owuwu saịtị a bụ ntọala nke SEO gị, dịkwa ka ụlọ ọ bụla, ntọala ga-siri ike. Ntọala na-adịghị ike ma ọ bụ nke na-anaghị emebi emebi bụ naanị na ụlọ gị ga-ada. N’ikpeazụ, ọ bụ naanị oge. N'otu aka ahụ, ebe nrụọrụ weebụ gị ga-emesịa daa n'enweghị ezigbo nhazi.
Ndị a bụ usoro iji mepụta ntọala saịtị kwesịrị ekwesị
Zụlite ọkwa tupu ịmalite mmepe weebụsaịtị gị
Ọ bụrụ na ị na-amalite webụsaịtị ọhụrụ, ị nwere ike ịhazi ụdị saịtị ahụ ga-ewe site na ọkọ. Ọbụna tupu ịmalite imepụta peeji na CMS, ịkwesịrị ịkọwa ụdị nhazi ị ga-achọ ka weebụsaịtị wee. Nwere ike ịme atụmatụ ahụ na akwụkwọ mgbasa ozi, bọọdụ mbadamba, ma ọ bụ na njikwa okwu.
Ihe omuma gi kwesiri inwe nhazi. Ihe omuma gosiputara kwesiri igba na uzo nke nwere ezi uche. Ozugbo ịmechara, usoro a ga-abụ usoro ntanetị gị na ihe owuwu URL gị, yabụ usoro ọ bụla dị mkpa ị na-eme na-emetụta ihe ị na-eme ebe a.
Onwere ihe ole na ole nke ichikota i kwesiri iburu n’uche.
Mee ka ebumnuche ebum n’uche gị bụrụ ihe ezi uche dị na ya. Anwala ileghara ihe omume gị anya.
Debe ọnụọgụ nke isi n'etiti abụọ na asaa. Ọ gwụla ma ịnọ na ebe nrụọrụ weebụ ịzụ ahịa eCommerce, ị chọghị inwe ọtụtụ edemede. Ọ na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị, "arụ ọrụ".
Gbalia ime ka onu ogugu ahia ha di n’ime otua. Ọ bụ ezie na nke a abughi ihe dị mkpa, ọ bụ ihe ndị nrụpụta weebụ kwesịrị ịnwale ma mezuo. Otu ngalaba ekwesighi inwe mpaghara iri, ebe nke ọzọ nwere naanị ise. Ọ na-eme ka weebụsaịtị wee bụrụ ihe na-enweghị ọrụ.
Ọdịdị URL gị kwesịrị ịgbaso n'okpuru usoro ịma ọkwa gị.
Ọdịdị ọzọ dị mkpa bụ ihe owuwu URL gị. Y’oburu n’iru uzo mbu nke oma, nke a gha abughi nsogbu. URL gị ga-ebu weebụsaịtị dị mkpa, otu ngalaba, tupu subcategory. Okwesiri ka www.Semalt.net/SEO/UsingQualityStructureDataToGetMoreClicks. Njikọ a na-ahazi ozi egosipụta n'ụkpụrụ ya.
Uzo uzo gi kwesiri idi na CSS ma obu HTML.
Mgbe ị mepụtara weebụsaịtị, dobe nzuzo ka ọ dị mfe. Iji asusu bekee mee ka o sie ike na WebCrawler ikpuchi saịtị gi.
Jiri akwa igodo mmiri na-emighị emi.
Mgbe ị na-ekpebi ihe na-aga, kpachara anya ka ị ghara lie akụkụ ndị kacha mkpa nke weebụsaịtị gị nke ukwuu na ọkwa gị, saịtị ndị na-adịghị ala ala na-arụ ọrụ kachasị mma maka ma ndị ọrụ weebụ na ndị na-agụ akwụkwọ gị.
Zụlite njikọ njikọta zuru oke
Anyị achọpụtala ihe atọ mere na omume a dị mkpa maka nhazi nke weebụsaịtị gị. Nke a bụ ndepụta nke ihe kpatara njikọ n'ime ime:
Ha na-enye ndị ọrụ ohere ịnyagharịa weebụsaịtị
Ha na-enyere aka ịhazi ọkwa ozi na weebụsaịtị.
Ha na - enyere aka ịgbasa ike ogo n'ofe weebụsaịtị ahụ, na - enye gị ọnọdụ ka mma.
Onye ọ bụla n'ime ndị a na-enye aka na ịmepụta mkpokọta weebụsaịtị ejikọtara ọnụ.
Njikọ n'ime abụghị ihe dịka sayensị roket. Ọ pụtara na ị na-ejikọ otu ọdịnaya ma ọ bụ ibe na weebụsaịtị gị na nke ọzọ. Njikọ a kwesịrị ime ga-eduzi onye na-agụ gị na peeji okirikiri ndị emetụtaghị na ibe ibe.
Njikọ dị n'ime na-agwa igwe nchọta ọchụchọ nke weebụsaịtị dị mkpa yana otu esi abanye ebe ahụ.